မန်စီးတီးကို ရှုံးနိမ့်တဲ့ပွဲမှာ ဒိုင်လူကြီးတွေ အမှားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ အာဆင်နယ်နည်းပြ ဝေဖန် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး မန်စီးတီးကို ရှုံးနိမ့်တဲ့ပွဲမှာ ဒိုင်လူကြီးတွေ အမှားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ အာဆင်နယ်နည်းပြ ဝေဖန်
Arsenal's French manager Arsene Wenger (L) speaks to fourth official Andre Marriner after they concede their third goal during the English Premier League football match between Manchester City and Arsenal at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 5, 2017. / AFP PHOTO / Oli SCARFF / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / OLI SCARFF/AFP/Getty Images
မန်စီးတီးကို ရှုံးနိမ့်တဲ့ပွဲမှာ ဒိုင်လူကြီးတွေ အမှားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ အာဆင်နယ်နည်းပြ ဝေဖန်
အာဆင်နယ် နည်းပြ အာစင်ဝင်းဂါးက အာဆင်နယ်နဲ့ ကစားတဲ့ပွဲမှာ ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း ပြည်စုံလုံလောက်မှု မရှိခဲ့ကြောင်း၊ မန်စီးတီးကွင်းလယ်လူ စတာလင်က ဟန်ဆောင် ဒိုက်ထိုးခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။
စတာလင်က ဟန်ဆောင်ဒိုက်ဒိုးမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် ကွင်းလယ်ဒိုင်လူကြီး မိုက်ကယ် အိုလီဗာဟာ ပယ်နယ်တီ ပေးခဲ့တယ်လို့ နည်းပြဝင်းဂါးက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂျီဆပ် သွင်းယူတဲ့ တတိယ ဂိုးအတွက် ဆေးလ်ဗားဟာ လူကျွံဘောပုံစံမျိုး ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒိုင်လူကြီးတွေက ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ နည်းပြ ဝင်းဂါးက စွပ်စွဲထားပါတယ်။
မန်စီးတီးဟာ အာဆင်နယ်ကို အနိုင်ရမှုကြောင့် ပရီးမီယားလိဂ် အမှတ်ပေးဇယားထိပ်မှာ ဆက်လက် ရပ်တည်နေပါတယ်။
မနျစီးတီးကို ရှုံးနိမျ့တဲ့ပှဲမှာ ဒိုငျလူကွီးတှေ အမှားလုပျခဲ့တယျလို့ အာဆငျနယျနညျးပွ ဝဖေနျ
အာဆငျနယျ နညျးပွ အာစငျဝငျးဂါးက အာဆငျနယျနဲ့ ကစားတဲ့ပှဲမှာ ဒိုငျလူကွီးတှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျပိုငျး ပွညျစုံလုံလောကျမှု မရှိခဲ့ကွောငျး၊ မနျစီးတီးကှငျးလယျလူ စတာလငျက ဟနျဆောငျ ဒိုကျထိုးခဲ့တယျလို့ စှပျစှဲပွဈတငျလိုကျပါတယျ။
စတာလငျက ဟနျဆောငျဒိုကျဒိုးမှုတှေ ရှိခဲ့ပမေယျ့ ကှငျးလယျဒိုငျလူကွီး မိုကျကယျ အိုလီဗာဟာ ပယျနယျတီ ပေးခဲ့တယျလို့ နညျးပွဝငျးဂါးက ပွောပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဂြီဆပျ သှငျးယူတဲ့ တတိယ ဂိုးအတှကျ ဆေးလျဗားဟာ လူကြှံဘောပုံစံမြိုး ဖွဈခဲ့ပမေယျ့လညျး ဒိုငျလူကွီးတှကေ ခှငျ့ပွုခဲ့တယျလို့ နညျးပွ ဝငျးဂါးက စှပျစှဲထားပါတယျ။
မနျစီးတီးဟာ အာဆငျနယျကို အနိုငျရမှုကွောငျ့ ပရီးမီယားလိဂျ အမှတျပေးဇယားထိပျမှာ ဆကျလကျ ရပျတညျနပေါတယျ။
Previous articleအောင်လအန်ဆန်ကို ဒုသမ္မတနဲ့ တပ်ချုပ် ဂုဏ်ပြု
Next articleသမ္မတ ပူတင်ကို ဆန္ဒပြသူ ၂၆၀ ဖမ်းဆီးခံရ